“Ny marina no haha olona afaka anareo” ( Jn 8, 32) - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nifarana ny fivoriana ara-potoana fanaon'ny Fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara. Tahaka ny mahazatra dia misy ny Hafatra ampitain'ny Eveka ho an'ny Kristianina Katolika sy ireo olona tsara sitra-po. Indro ampitaina etoana izany hafatra izany.
« Ny zavatra rehetra atao ho voninanitr’Andriamanitra » ( Tout faire pour mieux glorifier Dieu ». (Ad Majorem Dei Gloriam). Io no teny faneva nanorina mafy ny finoany. Tao no nanentana azy hahalala sy ho tia an’i Jesoa Kristy amin’ny fony tokoa. « Niova ianao Ramose » hoy ireo mpiara-miasa taminy satria nampifanarahany tanteraka tamin’ny fiainan’i Jesoa ny fiainany manontolo : Mivavaka, miaina ny fitiavana lavorary araka ny Evanjely. Miaina ny marina. Nahay nifandray tamin’ireo mompera sy masera ary tamin’ireo mpiara-mivavaka taminy na katolika na tsia. Isan’andro aorian’ny lakilasy izy dia namaky ny Tantaran’ny Olomasina amin’ireo mpianatra nazoto namonjy izany. Namola-tena tamin’ny zavatra maro izy: fifadia-kanina, fitondrana akanjo malailay, manao sapile tsy ankijanona eny andalana noho ny fitiavany manokana an’i Masina Maria, naharitra nibanjina ny Sakramenta Masina isan’andro, ary mampianatra katesizy..... Ny finoana ho azy dia fanamasinam-piainana. Hilazana amintsika fa Lehilahy tia Vavaka i Lucien Botovasoa. Lehilahy tia ny marina. Izany no tsy nampatahotra azy nanolo-tena ho martiry.
Raim-pianakaviana nanolo-tena tanteraka ho an’ny vady aman-janany. Tsy maintsy mody ao an-trano izy isan'andro isan’ndro na lavitra aza ny “tournée” ataony. Eo am-pisakafoana dia izy no manome aina ny dinidinika hahazoana hafaliana. Ho fiombonany amin’ny fijalian’i Kristy, mifady hanina izy isaky ny alarobia sy zoma, hany ka, amin’ireo andro ireo, matetika izy no mizara amin’ireo zanany izay anjara sakafo tokony hohaniny.